14as International gvSIG Shirka: «Dhaqaalaha iyo Waxsoosaarka» - Geofumadas
14as International gvSIG Shirka: «Dhaqaalaha iyo Waxsoosaarka»
Sebtember, 2018 GvSIG
Dugsiga Sare ee Farsamada Sare ee Geodetic, Cartographic iyo Topographic Engineering (Universitat Politècnica de València, Spain) ayaa martigelin doonta, mar labaad, Shirka Caalamiga ah ee GvSIG , kaas oo lagu qaban doono 24 illaa 26 bisha Oktoobar iyada oo loo yaqaan hal-ku-dhigga «Dhaqaalaha iyo Waxsoosaarka» .
Intii lagu guda jiray shirka waxaa jiri doona kulamo kala duwan mowduuc of bandhigyo (maamulka degmada, xaaladaha degdegga ah, beeraha ...), iyo dhowr seminaaro, ka mid ah kuwaas oo ah kuwa gvSIG codsatay in ay cilmi dhul ama Deegaanka iyo gvSIG Mobile lagu sameyn doonaa.
Diiwaangelinta labada siminaaro iyo kulamo for bandhigyo, waa lacag la'aan (oo leh awood xaddidan).
Labada diiwaanka la sameeyey madax banaan ee waraaqaha la marayo qaab jira bogga internetka ee Shirka , iyo tababaro ka October 4 in .
Barnaamijka dhamaystiran wuxuu ku jiraa .
 http://www.gvsig.com/en/ dhacdooyin / maalmo-gvsig / 14as-jornadas-gvsig / qora
 http://www.gvsig.com/es/ eventsos / Jornadas-gvsig / 14as- Jornadas-gvsig
 http://www.gvsig.com/en/ dhacdooyin / maalmo-gvsig / 14as-jornadas-gvsig / barnaamij
Post Previous«Previous Maareynta mashaariicda: ka mid ah caqabadaha ah in injineerka madaniga uusan ka baran fasalka
Post Next Xirfadaha in Mashruuca Rayidka ahi uu ka helo mulkiilaha dhismahaNext »